Saameynta Dagaalka Yaman uu Soomaaliya Ku Yeelan Karo | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wargeyska Xaqiiqa Times Saameynta Dagaalka Yaman uu Soomaaliya Ku Yeelan Karo
Saameynta Dagaalka Yaman uu Soomaaliya Ku Yeelan Karo
Kaddib la wareegiddii Xuutiyiinta ee Sanca sanadkii hore, Yaman waxa ay gashay waji cusub oo dagaal wajiyo badan leh kaasi oo markii danbe keentay in ay soo faragaliyaan dowladaha khaliijka ka dib markey arkeen in Yaman la wareegtay Xuuthiyiin taageero ka helaayo Iiraan, danahoodiina ay khatar galeen.
Dowlada Soomaaliya waxa ay mawqif cad ka istaagtay dagaalka Yaman iyada oo si degdeg ah bayaan uga soo saartay maalin ka dib markeey duqeynta bilaabeen isbaheysiga uu hogaaminayo Boqortooyada Sacuudiga.
Bayaanka ka soo baxay Wasaaradda Arrimada Dibada ee Soomaaliya 27 Maarso 2015 ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay taageersantahay dagaalka dowladaha khaliijka qaadeen ee sharciyadda Madaxweyne Cabdi Rabi Mansuur ku taageerayaan.
Go`aanka dowladda Soomaaliya waxa uu khatar galiyay Soomaali badan oo ku nool dalkaasi Yaman kuwaasi oo isugu jiro arday, dad deggan muddo dheer iyo qaxooti waayo waxaa loo fasirtay in Soomaaliya dagaalka ay qeyb ka tahay.
Dhanka kale go`aanka dowladda Soomaaliya ay ku taageertay dagaalka isbaheysiga Sacuudiga uu hogaaminayo ku qaadeen dalka Yaman waxa uu ahaa mid ka hortag u ah in aan la gacan bidixeynin dowladda Soomaaliya, loona soo daba marin maamullada ka jiro Soomaaliya ee Soomaaliland iyo Puntland oo labaduba xuduud badeed la lehYaman.
Soomaaliya waxa ay wadaagaan Yaman dhibaatooyin fara badan sida qabyaaladda, kooxaha ku xiran Al-qaacida, awood darrada dowaladda dhexe, gobollada in ay go`aan rabaan, Musuqmaamusaqa, Saboolnimo baahsan, cunista Qaadka iyo dowladnimada oo labada shacaba fahan khaldan ka heystaan.
Labada dal waxaa ka dhaxeeyo xiriir ganacsi oo aad u xoog badan. Sanad kasta waxaa loo dhoofiyaa dalka Yaman xoolo aad u tiro badan isugu jiro Geel, Lo` iyo Ari. Ganacsigan ayaa aad u sii xoogeysanayay sanadihii ugu dambeeyay ayadoo lagu qiyaasay in Yaman gaaraan sanad kastaba xoolo gaarayo hal malyan oo neef.
Dhanka kale, dalka Yaman waxaa yaallo hub aad u tira badan, gacanta shacabkana ku jira. Iyada oo dowlad ka jirto dalkaas ayuu hadana ahaan jiray isha ugu badan ee hubka Soomaaliya ka soo galo, waxaana ka jiray labada dal ganacsi sharci daro oo dhanka hubka, si dhuumaaleysi ahna looga keeni jiray Yaman.
Maanta qaska Yaman ka bilowday waxa ay keentay in hubkii dowladda uu galo gacanta shacabka. Waxaa meesha ka baxay kala dambeyntii iyo sharcigii, waxaana burburay ilaaladii xuduudaha Yaman. Taasi waxa ay saameyn weyn ku yeelan doontaa xaaladda Soomaaliya oo awalba ilaalo xuduud aan lahayn, amni fiicanna uusan ka jirin.
Hubkaasi halista ah ururada uu gacantooda galay waxaa ka mid ah Al-qaacidada Yaman oo bilaawday in ay ka faaiideysato burburka ku dhacay ciidamda Yaman waxaana sii xoojiyay isballaarinta fallaagada Xuuthiyiinta ay sameeyeen taasi oo keentay in Al-qaacidada Yaman taageero ka dhex hesho qabiilada Yaman ee Sunnada ah.
Al-qaaacidada Yaman waxey bilowday in ay isku ballaariso dhul badan oo ka tirsan koofurta Yaman. Arrintaasi waxa ay saameyn ku yeelan doontaa Soomaaliya oo darisna la ah Yaman waayo Alqaacidada Yaman iyo Xarakada Shabaab waxaa ka dhaxeeyo xiriir xooggan, Soomaaliyana waxaa jooga dagaalyahanno Alqaacida ah oo iskugu jiro ajaanib iyo kuwa reer Yaman kana barbar dagaallamayo Alshabaab, khibradna ku biiriyay dagaalka ay ku jirto Xarakada AlShabaab.
Dhanka kale hadii uu dagaalka Yaman sii xoogeysto waxaa hubaal ah in Soomaaliya ay kusoo qulquli doonaan mawjado qaxooti reer Yaman ah kuwaasi oo ka soo cararayo dagaalka. Taasi waxa ay saameyn weyn ku yeelan doontaa nolosha shacabka Soomaaliyeed. Maanta qaxootiga Soomaaliyeed ayaga ayaa tooda u yaabban oo dal iyo dibadba tabaaleysan, qaxootina ku ah, saboolnimana u sii dheertahay. In qaxooti badan soomaaliya ku soo qaxaan waxey uga sii dareysaa xaalada dalka ee dhaqaalo darrada iyo nolol xumadaba awal ka taagneyd, xaalkuna waxuu noqon doonaa adigoo harsan waayay malaguu soo hargalay. Sidoo kale waxa ay wax u dhimeysaa amniga iyo caafimaadka, waayo dadkani waxaa ku soo dhex dhuuman karro dagaalyahanno Alqaacida ah, rabana in ay ku biiraan Xarakada Alshabaab. Sidoo kale waxaa soo dhex gali karo qaxootiga soo qaxaayo dad qabo cudurro khatar ah, si fududna lagu faafin karo, Soomaaliyana maleh fayo-dhoor iyo dad u diyaarsan xaaladahaas oo kale.
Hadii uu sii socda dagaalka Yaman waxaa hubaal ah in uu isku badali doono dagaal gobol kaasi ay ku lug yeelan doonaan dowlada badan hadii uuba isku badalin mid caalami ah, Soomaaliyana waxaa loo baahan doonaa hawadeeda, badeeda iyo dhulkeedaba si dagaal looga qaado, taasi oo keeni doonto in dabka Soomaaliya iyadana soo gaaro.
Qore : Axmed Muxumed Cabdullahi ( Bukaari )
Previous articleBooqashada Taariikhiga Ah ee John Kerry uu Soomaaliya Ku Yimid
Next articleSOHEDA oo Waxbarasho Bilaash Ah Siisa Ubadka Kasoo Jeeda Beelaha La Heyb Sooco